Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #255
M ga-achọ ịjụ, olileanya na a maara na ...
All ndabere, na ọtụtụ payware ụgbọ elu nwere otutu nke akwụkwọ, dị ka ego anatara, akwụkwọ ọsọ na na. M na-agbalị maka ọnwa na-ahụ ndị a maka Thomas Ruth A330 / 340, na ọtụtụ ndị ọzọ ụgbọ elu, ma ka ihe ọ bụla. Ya mere, ọ onye ọ bụla maara na ebe-ahụ ya?
N'ihi a otutu tupu.
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #256
Ọfọn, m na-eji wikipedia maka ụgbọ ọsọ / elu.
M anya na a na-enyere ihe ndị ọzọ ..
Nyochaa ihe FSX na-ekwu maka max mmanụ / nnukwu ibu megide wikipedia, dịka ihe dị ebe ahụ na-abụ ihe ziri ezi. Ọ B .R. FSX abụghị otu na nke ahụ bụ ihe dị mfe idozi
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #257
Isi nsogbu na a mgbu ..... bụ nke a, mgbe na-efe efe, mgbe ị na-agakwuru ndị vne, ma ọ bụ uloanumaanu ọsọ, na-IAS teepu ọkọkpọhi red. Ọ bụghị na tr A330 / 340. N'ihi na, m na ọ dịghị enyere anyị aka ịmata ebe uloanumaanu ọsọ nke ihe bụ, i nwere ike na-eche na. The checklist ya onwe-adịghị na-enye ozi, ọ bụghị otu onye m hụrụ.
M nwee ike igwu ndị CLS A340 Docs ... ma m kpọrọ obi abụọ nke ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka na tr A340.
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #258
ọma n'eziokwu ... m na-aga site na ihe m nwere ike ịhụ maka ezigbo nnụnụ .....
dị ka 747 (n'agbanyeghị nke ọ bụla), ana m eme 245 n'okpuru 10K na-arị elu, ma tinye autotrottle na ihe ọ bụla ọsọ ọsọ na IAS, njedebe ikpeazụ m na-eme na 135
na uloanumaanu-agba bụ n'ezie mfe iji chọpụta! na ọ bụ na ndị aircraft.cfg file
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #259
Hụrụ ya .... ma ọ dịghị ụzọ a na-ezi ezi.
Full flaps uloanumaanu ọsọ-120 kts maka Airbus a340-500?
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #260
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #261
ọ bụ a OGOLOGO oge shot ma ị maara ihe ... MEGODỊ na-jide Airbus ... ahụ ma ọ bụrụ na ha ga-enyere gị aka si!
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #306
Mgbe ụfọdụ search gburugburu gị tube, ka m nwee ike chọpụta ụfọdụ ihe ..
A340-600, obibia ọsọ 160-170 kts, na uloanumaanu ọsọ ịbụ dị n'okpuru 160 kts, nke bụ otu nnukwu woow .... sịkwa m bu ihe dị otú a ike oge ala ihe a. Nta A340s ... m kasị mma maa, 5-10 kts ala ọsọ, ma ka nnọọ ngwa ngwa.
Ọ dị onye nwere ihe Ama na nke a?
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #308
Description: A340-500,600 mmachi si FCOM
Aircraft akwụkwọ 3 afọ 4 ọnwa gara aga #312
N'ihi a otutu madu. M bụ ike iji nweta ya site na saịtị, ọ dịghị otú m ga-akwụ maka ya. Ma, ka m nwee ike igwu ya ebe ọzọ. Agbanyeghị, otu nnukwu, nnukwu ekele. Abụghị m maara nke a akwụkwọ na niile.